Sir James Dyson ayaa aasaasaya matxaf kor loogu qaadayo xirfada injineernimada - BBC News Somali
Sir James Dyson ayaa aasaasaya matxaf kor loogu qaadayo xirfada injineernimada
10 Nofembar 2016
Image caption Ardayda injineerada ayaa la shaqayn doona shaqaalaha cilmi baarista ee kambaska Dyson ee Wiltshire
Ganacsadaha shirkada Dyson ee Sir James Dyson, ayaa furi doona matxaf lagu tababaro injineerada oo sheegay in aad loogu baahan yahay hadii shirkadaha UK ay doonayaan inay tartamaan.
Dyson Institute of Technology, ayaa la furayaa 2017, waxayna soo saari doontaa arday waddanka u dhashay oo xirfad leh, ayuu sheegay Sir James.
Wuxuu sheegay inuu uga caban jiray sanooyin badan wasiirada sida ay u yar yihiin xirfada injineerada, iyo in wasiirka jaamacadaha Jo Johnson, uu ku dhiiri galiyay inuu aasaaso matxaf lagu tababaro ardayda.
Sir James ayaa sheegay in UK ay u baahan tahay hal milyan oo kale oo injineero ah oo leh xirfadaha elektarooniga, borogoraamyada iyo kombutarada sanadka markuu yahay 2020.
Matxafka oo ay ku baxayso £15m ayaa laga dhisi doonaa kambaska shirkada Dyson ee Malmesbury , Wiltshire, waxayna bixin doontaa afar sano oo degree jaamacadeed oo ay iska kaashanayaan Jaamacada Warwick.
Matxafka teknoolajiyada ayaa "wax ka qaban doonta xirfadaha injineerada ee ku yaraatay UK"
" Waxaan doonaynaa inaan gacanteena ku xalino dhibaatada" Sir James, ayaa sheegay inuu doonayo in matxafka uu mustaqbalka noqdo Jaamacada Dyson oo bixisa degree.
Ardayda ayaa la siin doonaa mishaar inta ay wax baranayaan, waxbarashadana waa lacag la'aan. Sir James ayaa sheegay inay ka shaqayn doonaan mashaariic iyagoo haysta shaqaale cilmi baaris oo taageeraya.
Image caption Matxafka oo ay ku baxayso £15 milyan ayaa ardayda qaadan doona sanadka 2017
Sir James, wuxuu sheegay inaan la fahansanayn sida loogu baahan yahay shaqaale xirfad leh iyo tartanka adag ee ka jira caalamka.
Injineerada ka shaqeeya shirkadiisa ayaa ka kala yimid 34 waddan, wuxuu sheegay in warshadaha UK ay soo wajahday tartan adag oo kaga imanaya Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo Hindiya.
Image caption Injineerada ayaa u baahan xirfada borogoraamyada kombuterka, kombutarada iyo elektaroonikada
Lord Bhattacharyya, oo ah madaxa Warwick Manufacturing Group ee Jaamacada Warwick, ayaa sheegay inuu doonayo inuu soo saaro dad xirfad leh isagoo kaashanaya shirkada Dyson.
" Waa muhiim si shirkadaha UK ay ula tartamaan caalamka waa inaan haysanaa dad leh xirfada saxda ah." ayuu sheegay.
Image caption Ardayda ayaa ku baran doonta afar sano degree injineernimo matxafka Dyson
" Wasiirka jaamacadaha Jo Johnson, ayaa sheegay in Dyson Institute of Technology aysan bixinayn oo kaliya waxbarasho heer jaamacadeed ah balse ay soo saarayso jiilka xiga ee injineerada ah".